Safarka waa u quudhin kama dambaysta ah, laakiin waa in aad samayn boorsooyinka lacag la'aan ah, gaar ahaan layovers ama haddii kaliya aad qabto maalin oo lacag la'aan ah in mid ka mid ah Germany magaalooyinka caanka ah. Waxaan leenahay dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay meelaha boorsooyinka bidix ee Germany saddex ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee ay, Berlin, Munich, iyo Hamburg.
Haddii aad ka qayb Oktoberfest Munich, taagan ka baqaa iridda Brandenburg ee Berlin ama feeysteeyaan vibe Xisbiga Reeperbahn ee Hamburg, kuwanu waa siyaabaha ugu sahlan uguna habboon si loo hubiyo in aad boorsooyinka si fiican loo daryeelo inta aad sahamin qaaday.
Iyadoo ku xiran baaxadda labiska aad u baahan tahay, waxay ku kici u dhexeeya € 4 iyo € 6 maalin iyo muddada kaydinta ugu badnaan waa 72 saacadood. Haddii aad doorbidayso booqday xafiiska boorsooyinka bidix ah, waxaa jira hal maalin la furo ka 6 ahay in 10 pm iyo saabsan € 5 item.
Kaydinta boorsooyinka Central Station Munich ayaa noqon doona neecaw kuu. Waxaa jira tiro badan oo lookarrada iyo waxaa jira calaamado in ay si fudud u helaan iyaga. labiska A caadiga ah ee aad ku kici doona oo ku saabsan € 4 maalin kasta iyo ka weyn a, suud-case labiska xajmi ku saabsan € 6 maalin kasta. si kastaba ha ahaatee waxaa jira xad xannibaad 72-saac ah.
Your doorasho kaliya waa garoonka Hamburg. Xafiiska Left shandadaha waa at Terminal 2, heerka 1 Bixitaanka iyo waxa ay furan yihiin Isniinta ilaa Sunday ka 4:30 ahay in 11 pm. Waxaad ku bixin doonaa inta u dhaxaysa € 5 iyo € 25, oo dhan ku xiran size. The aad boorsooyinka waaweyn, aad lacag sare, iyo garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale soo eedeeyo € 3 sida lacag processing hal mar halkii item.
Waxaad ku hayn kartaa boorsooyinka halkan Click here waqti ku koobnayn oo ay ugu wanaagsan ee ka hor hubiyo ka hor yimid. Urursada macluumaadka ugu badan ee aad ka hor inta u safrin karaa.
Marka safar iyo kaydinta boorsooyinka loo baahan yahay, waxaa had iyo jeer ugu fiican in loo diyaar garoobo. Double hubi dhammaan faahfaahinta iyo xal haboon aad u heli lahayd iyo meesha aad u socotid. Haddii taasi madaarada, tababar saldhigyada ama hubinta adeegyada gaarka ah nifty online, waxaa oo dhan laga heli karaa click ee badhan. boorsooyinka Happy iyo qaar ka mid ah lacagta badbaadiyo on tigidhada tareenka iyo isticmaalka aad Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Halka laga helo Goobaha Left shandadaha In Germany?” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-germany/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
leftluggage Munich trainjourney Tranride TrainStation tareen safarka travelberlin travelgermany travelhamburg
safarka tareenka Italy, Talooyin safarka tareenka, safarka Europe
maaliyadda tareenka, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Sweden, safarka Europe